01/10/15 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Saturday, October 31, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Saturday, October 31, 2015 ဝင်းလှိုင်-နည်းပညာ No comments
Keep Running! Sir, Yes Sir! (2015) DVDRip 350MB
Friday, October 30, 2015 Unknown 1 comment
ဒီနေ့အတွက် 2015 ထဲမှာ အသစ်ထွက်လာတဲ့ ထိုင်းစစ်သား ဟာသကားလေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ အသက် 18 ပြည့်ပြီးသူတိုင်း
မ၀င်မနေရ စစ်မှုထမ်း (၂) နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ရောက်ရှိလာတဲ့
အနယ်အနယ်အရပ်ရပ်က ထိုင်းလူငယ်လေးတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ထိုင်းဇာတ်ကားတွေ ထုံးစံအတိုင်း သရဲဟာသ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့အတူ
ထိုင်းလူငယ်သဘာဝ တွေကိုလည်း ရှုစားရမှာပါ။ ကဲ ထိုင်းစကားနားလည်တဲ့
လူတွေအတွက်ကတော့ အူတက်အောင် ရီရမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ဘဲ ညွှန်းလိုက်
ပါရစေ။ မိသားစုတွေအတူတကွ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
DVD rip 480P ကို file size 350 MB နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။
Genre : Action , Comedy, War
Summary of Keep Running Sir Yes Sir 2015
Ina3rd year military course at Khao Chon Kai, two groups of military students
are trying to dominate each other. There were many conflicts and bullies between them since they were at their high schools. At their practice on the field, they always make troubles causing their mentors to punish their entire company. Other than the conflicts between the two gangs, there seems to beamystery along their military course here, especially at night time. Not so long, they have found out that one of their current mentor, sarge Danai, was dead. They need to bare on an extra field practice from the sarge.
How To Download (ဒေါင်းလော့ချနည်း)
** Step-1.အောက်က pcloud ပုံလေးကို ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
** Step-2. "5စက္ကန့် " လောက်စောင့်ပေးပါ။
** Step-3. ညာဘက်အပေါ်ထောင့်နားက "<< SKIP AD >>" ကိုနှိပ်ပေးပါ။
** Step-4. Pcloud Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Movie7plus Admin Team
Friday, October 30, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ CM Security ဆိုတာကတော့ ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Antivirus တွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေး မယ့် Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် အခြားသောအသုံးဝင်မယ့် Feature တွေများစွာပါဝင်တာ ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ မသုံးစေချင်တဲ့ Application တွေကိုလည်း Lock ချထားပြီးပိတ်ထားပေးနိုင်ပါ တယ်။ ဖုန်းကိုလေးလံစေမယ့် Cache , Junk အစရှိတာတွေအားလုံးကိုလည်းရှင်းလင်းပေးပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.0 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Momentum 2015 HD720P 500 MB မြန်မာစာတမ်းထိုး
အောက်တိုဘာလ (16) ရက်နေ့က ရုံတင်တဲ့ momentum ဇာတ်ကားလေးကို
ရုပ်သံအကြည် ထွက်ထွက်ချင်းဘဲ movie7plus ပရိတ်သတ်များအတွက်
ဒီဇာတ်ကားကတော့ မင်းသမီးဇာတ်လို့ဆိုလို့ရအောင်ပဲ Alexis..ဆိုတဲ့မိန်းကလေး
တစ်ယောက် ရဲ့ စွန့်စားခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်နေပါတယ် ယောက်ျားလေးသုံးယောက်နဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့ ဓားပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ...
အလုပ်တစ်ခုလက်ခံရာကနေ...သူတို့ထင်မထားနဲ့အဲဒီအလုပ်ရဲ့နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှုက်ချက်တွေကြောင့် သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုအဆုံးသတ်စီရင်ရာမှ ...တစ်ဦးတည်းကျန်ခဲ့တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောအဖွဲ့ဝင် ... Alexis ၊ တစ်ဖက်အဖွဲ့က သူ့ရည်စားဟောင်းကို သူ့ရှေ့မှာပဲ ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ...လျော်ကြေးအနေနဲ့ စိန်တွေကိုရယူနိုင်ဖို့..
တွေနဲ့အပြိုင် အမဲလိုက်သလိုကြံစည်ကာအကွက်ကျကျ လက်တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ ... Alexis
ဇနီးနဲ့ကလေးလေးကိုလဲ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူတွေရန်က Alexis ရဲ့ .သက်စွန့်ဆံဖျား
ကာကွယ်ပုံတွေက ...ဇာတ်ကားအစမှအဆုံးကိုကြည့်ဖြစ်အောင် စွဲဆောင်မှု့အပြည့်နဲ့...
ခေါ်ဆောင်သွားမဲ့ ၂၀၁၅ ထွက်..အက်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်
Subtitle : မြန်မာစာတမ်းထိုး
Summary of Momentum 2015
She quickly finds it was never just about the diamonds. A brutal murder sparks
a cat and mouse chase between...
♪ ဖုန်းထဲမှာဒီဇိုင်းဆန်းတဲ့ Icon လေးများအသုံးပြုနိုင်မယ့် - Rewun – Icon Pack v2.6.0 Apk (25-Oct) ♫
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Rewun – Icon Pack v2.6.0 ကတော့တစ်ခါမှမတင်ပေးဖူးသေးပါဘူးဗျာ။ သူ့ရဲ့ Screen Shoot လေးတွေကြည့်ပြီး ဒီဇိုင်းအရမ်းမိုက်လို့ ဘော်ဒါတွေကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ။ HD ရုပ်ထွက် မျိုးနဲ့ Icon ပေါင်း 3360 ကျော်အထိပါဝင်ပါတယ်။ Icon ရဲ့ဒီဇိုင်း ၊ Background ၊ Theme ၊ Wallpaper ၊ Widget ၊ အနဲ့အခြားသော Feature လေးတွေရုပ်ထွက်တွေ အရမ်းကောင်းလွန်းတာမို့ မျှဝေပေးလိုက် တာပါ။ အောက်မှာ Screen Shoot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ နမူနာဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦး သဘောကျပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာဝင်ပြီးဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 4.0.3 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
▼ 2015 (4462)
၁၅ ဒေါ်လာတန် စမတ်ဖုန်းသစ်ကို အိန္ဒိယတွင် ရောင်းချမည်...
ကွန်ပျူတာအတွက် ဆောင်းထားသင့်တဲ့ Junkware Removal T...
Launcher လေးတွေ အသုံးပြုတာဝါသနာပါသူများအတွက် lucid...
Argo 2012 HD720P 500 MB မြန်မာစာတမ်းထိုး
ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာတွေဖတ်ဖို့ Android apk ကိ...
Myo Gyi မျိုးကြီး သီချင်း collection MP3
Lay Phyu ‎လေးဖြူ သီချင်း‬ Collection MP3
Ange အငဲ သီချင်း collection Mp3
Sai Htee Sei (စိုင်းထီးဆိုင်) သီချင်းစုစည်းမှု MP-3...
Htoo Eain Thin သီချင်း Collection MP3
Garm Wars The Last Druid 2014 HDRip 500 MB
Iron Girl: Ultimate Weapon (2015) 720P HDrip 500 M...
Final Destination IV (2009) BRrip 720P 500 MB အကြည...
Final Destination V (2011) BRrip 720P 500 MB အကြည်...
Damage 2009 HD 720P 500 MB အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုး
Kung Fu Panda 2008 720p 500 MB အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုး
Kung Fu Panda2(2011) 720p 500 MB အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိ...
Terminator 2: Judgment Day 1991 720P 500 MB အင်္ဂလိပ...
Terminator 3: Rise of the Machines 2003 HD720P 500...
Avengers 2: Age Of Ultron (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
♪ Internet Download Manager v6.25 Build2+ Patch ...
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (28) (21.10.15)...
♪ လှုပ်ရှားနေတဲ့ကာတွန်းအရုပ်လေးတွေဖန်တီးနိုင်တဲ့ - ...
♪ Android ဖုန်းအတွက်လှပရိုးရှင်းတဲ့ Wallpaper များ...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-025 (19.10.15) ...
♪ ချစ်စရာပုံလေးတွေဖန်တီးပြီး Sticker လှလှလေးတွေပါထ...
♪ Monkey Test အပါအဝင် Ghost Push Virus တွေကို အမြစ...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue 25 (19....
TopUp 2015 (4) in 1 For Android